WAR-MURTIYEED: Shirka London ee arimaha Soomaaliya (Ku akhriso afsoomaali) – SBC
WAR-MURTIYEED: Shirka London ee arimaha Soomaaliya (Ku akhriso afsoomaali)
Posted by editor on February 23, 2012 Comments
Warbaahinta SBC waxaa soo gaaray nuqul ka mid ah warmuriteeyeedkii shirka Soomaalida ee ka dhacay magaalada London ee caasimada UK, warsaxaafadeedka ayaa u qornaa sida.
Shirka London ee ku saabsan Soomaaliya waxaa uu aqalka Lancaster House uu ka dhacay 23kii Febraayo 2012, waxaana ka soo qaybgaley konton iyo shan wefdi oo ka kala socdey Soomaaliya iyo beesha caalamka.
Waxa aan shirney waqti muhiim u ah Taariikhda Soomaaliya. Soomaaliya waxaa ay hadda ka soo baxaysaa dhibaatooyin bani’aadamnimo kuwii waqtigan ugu xumaa dunida. Ciidamo Afrikaan iyo Soomaali ah ayaa Al Shabaab ka saarey Muqdisho iyo degaamo kale. Hay’adaha ku-meelgaarka ah waxaa uu waqtigoodu dhammaanayaa Agoosto 2012, waxaana dadka Soomaaliya ay doonayaan in la caddeeyo waxa ka dambeyn doona. Xaaladdu weli ma deggana, waxaana ay u baahan tahay taageero degdeg ah oo ay siiso bulshada caalamka.
Shirku waxaa uu diiradda saarey sababaha dhalinaya degganaan la’aanta, iyo sidoo kale waxyaabaha calaamadaha u ah (macaluusha, burcad-badeednimada, iyo argagaxisanimada).Annaga oo bulshada caalamka ah, waxaan isla garanney: in aan dardar cusub gelinno geeddi-socodka siyaasadda; in aan xoojinno AMISOM oo aan Soomaaliya gacan ka siinno kobcinta ciidankeeda ammaanka; in aan gacan ka geysanno degannaanshaha heer degaan; in aan ku dhaqaaqno tallaabo wax looga qabanayo burcad-badeedda iyo argagaxisada.
Waxaan ku heshiinney in, muddo ka dib, Soomaalidu ay la wareegaan mas’uuliyadda ammaankooda ayna kobciyaan nidaamkooda cadaaladda si ay wax uga qabtaan halista ku wajahan ammaankooda ayna wanaajiyaan helidda caddaaladda. Waxaan aqoonsanney in Soomaalida oo keliya ay u taallo in ay go’aansadaan nooca ammaan iyo caddaalad ee ay doonayaan.
Waxaan soo dhoweyneynaa guulaha ay gaareen degaanno ka mid ah Soomaaliya ee ay ku abuureen goobo deggan, waxaana aan ku heshiinney in aan kordhinno taageero lagu dhiso maamul sharci ah oo nabad ku dhisan, iyo si loo wanaajiyo adeegyada ay helaan dadka ku nool degaamadaas. Waxaan ku heshiinney in dadaallada noocaas ahi ay dhiirrigeliyaan/kor u qaadaan wadajirka, ayna qayb ka noqdaan geeddi-socodka siyaasadeed ee qaranka.
Waxaan ku heshiinney in guud ahaan taageerada arrimaha degannaanshaha ee gudaha loo bixiyo si waafaqsan Heshiiska Cusub ee ka hawlgelidda qaramada jilicsan ee dhowaan lagu ansxiyey Busan, oo aan ka faa’iideysanno istiraatiijiyadihii dejinta ee ay diyaariyeen IGAD iyo Dowladda Federalka ee Ku-meelgaarka ah. Waxa aan ayidney tiro mabaa’dii ah oo hagaya taageerada caalamiga ah ee la siinayo arrimaha degannaanshaha ee gudaha ee Soomaaliya (Lifaaqa C). Waxaan xusney in la sameeyey Sanduuqa Maaliyad Degganaansho oo cusub kaas oo qaar badan oo innaga mid ahi ay wax ku biirin doonaan1.
C/RISAAQ AXMED says:
runtii waa qodobbo aad u fiican waxaan leeyahay allaha soomaalida fahandiiyo dantooda